शनिदेवको नमन गर्दै हेर्नुहोस् आजको यति शुभ राशिफल, कसलाई कति राम्रो? – Suchana Hub
शनिदेवको नमन गर्दै हेर्नुहोस् आजको यति शुभ राशिफल, कसलाई कति राम्रो?
काठमाडौं । आज मिति २०७७ साल असोज २४ गतेको राशिफल यसप्रकार रहेको छ :
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) : भविष्यका लागि विशेष काममा जग बसाउने मौका छ । व्यापारमा प्रशस्त फाइदा हुनेछ । पुराना सापटी तथा लेनदेनका मुद्दाहरु स’ल्टाउँन सकिने हुदा मन प्रशन्न रहनेछ।
वृष राशि ( इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो ) : औषधीजन्य तथा खाद्यान्नसँग सम्वन्धीत सामानको खरिद बिक्रीमा वृद्धि हुनेछ भने अन्य सामानको व्यापारमा मन्दि आउँने तथा घाटा लाग्नेछ । चिताएको काममा सोचेजस्तै सफलता मिल्नेछ भने प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ। विभिन्न अवसरले पछ्याउनेछन् ।
मिथुन राशि ( का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह ) : अरूका काममा समय बित्न सक्छ । उपलब्धि प्राप्त गर्न निकै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । व्यापारमा प्रशस्त फाइदा हुनेछ । पारिवारिक सम्बन्ध सुध्रिने छ। पढाइको लगावले बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो बन्नेछ र लेखन कलामा निखारता आउनेछ। प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ।
कर्कट राशि ( हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो ) : दिगो फाइदाका लागि लगानी बढाउन सकिनेछ । बोलीको प्रभाव बढ्नेछ भने बाेलीकाे भरमा काम सम्पादन हुनेछ। प्रेम प्रस्ताव आउँने तथा पति पत्नी विच एक अर्कालाई सहयोग गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ। काम वा अध्ययनको शिलशिलामा विदेश जाने मौका मिल्नेछ भने सरसफाईमा विशेष ध्यान दिनुहोला।
सिंह राशि ( मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे ) : आकस्मिक खर्चले अर्थ अभाव देखापर्न सक्छ। पढाइ लेखाइमा चाहेजस्तो सफलता प्राप्त नहुदा मन खिन्न हुनेछ। नजिकका मानिससँग मनमुटाव बढ्नेछ। परिस्थिति अनुसार चल्न नसक्ता दु:ख पाइनेछ। बेसुरमा दिइएको वचनले अप्ठ्यारो पर्ने हुँदा सचेत रहनुहोला।
कन्या राशि ( टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो ) : गरिएका कामको राम्रै मूल्यांकन हुनेछ भने साझेदारीमा पनि फाइदा हुनेछ। पढाइ लेखाइमा फड्को मार्दै नतिजा आफ्नो पोल्टोमा पार्न सकिनेछ। बोलीको प्रभाव बढ्ने हुनाले कार्यसम्पादन गर्ने क्षमता पनि बढ्नेछ। विभिन्न अवसरले पछ्याउनेछन् ।
तुला राशि ( र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते ) : आलोचकहरूले समेत प्रशंसा गर्न थाल्नेछन्। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ। आफन्त तथा गुरुजनहरुको सुझावलाई सिरोधार्य गर्दै अगाढि बढ्न सकिनेछ। माया गरेको मानिसबाट उपाहार प्राप्तिको योग रहेको छ। विभिन्न अवसरले पछ्याउनेछन् ।
वृश्चिक राशि ( तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु ) : आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउँदै दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला रहेको छ । आर्थिक व्यावस्थापनका लागी गरिने कामहरु अन्तिम निष्कर्षमा नपुगी विचमानै अवरुद्ध हुन सक्छन्,ध्यान दिनुहोला । सहयोगको आशा देखाउनेहरूले धोका दिन सक्छन, सचेत रहनुहोस् ।
धनु राशि ( ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे ) : सरसफाईमा विशेष ध्यान दिनुहोला । सामान्य आँखा सम्वन्धी समस्याले सताउँन सक्छ ध्यान दिनुहोला । अरूका काममा समय बित्न सक्छ । उपलब्धि प्राप्त गर्न निकै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । स्वास्थ्यका गढ़बधि हुन सक्छ भने सवारी चलाउँदा विशेष ध्यान दिनुहोला ।
मकर राशि ( भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि ) : आलोचकहरूले समेत प्रशंसा गर्न थाल्नेछन्। व्यापारमा प्रशस्त फाइदा हुनेछ । प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ भने जीवन साथिको सहयोगले नयाँ कामको थालनी गर्न सकिनेछ। आयआर्जनका स्रोत बढ्नेछन् ।
कुम्भ राशि ( गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द ) : राजनीति तथा समाजसेवामा गरीएको लगानी निकै फलदायी हुनेछ भने पद पाउने योग छ। मान सम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठामा बृद्धि भएर जानेछ । जटिल काम समेत सम्पादन हुनेछ । पहिलेको सफलताले उत्साह जगाउनेछ।
मीन राशि ( दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि ) : प्रतिस्पर्धाले नयाँ अवसर दिलाउन सक्छ। व्यवसायमा लाग्नेहरूलाई विशेष फाइदा होला । दिगो फाइदाका लागि लगानी बढाउन सकिनेछ । नयाँ योजना प्रारम्भ गर्न सकिनेछ र आयआर्जनका विविध स्रोत फेला पर्नेछन्। माया प्रेम तथा मित्रताको बन्धन कसिलो भएर जानेछ।
Previous सन्तोषी माताको दर्शन गर्दै हेर्नुहोस् आजको यति शुभ राशिफल
Next यति राम्रो आजको राशिफल, सबैले पढ्नुहोस्